Talo-siinta Blog: Lendo.org | Martech Zone
Talo-siinta Blog: Lendo.org
Axad, Juun 8, 2007 Khamiista, Oktoobar 23, 2014 Douglas Karr
Waad ku mahadsan tahay André codsigeyga ugu horreeya ee codsigeyga oo ku qoran luqad kale! Lendo.org (waxaa loo tarjumay: Akhrinta) waa degel ka timid dalka Brazil oo ku saabsan buugaagta dib u eegista, gorfaynta suugaanta, aragtida tacliimeed ee suugaanta, luqadda, shaqooyinka, gabayada iyo waxyaabo kale oo badan!
Thanks to Google turjumi, Waxaan awooday inaan si dhab ah u akhriyo qoraalada oo aan u fiirsado goobta. André waa blogger nimco leh waxaadna ku sheegi kartaa qoraalkiisa, wuxuu u sameynayaa inuu la wadaago dareenkiisa dhagaystayaashiisa.
Helitaanka fursad lagu wanaajiyo Lendo.org waxay ahayd halgan, wuxuu qabtay shaqo la yaab leh oo ku hagaajinaysa balooggiisa - shaki kuma jiro inay wax bixinayso! Qoraalka André waa mid fantastik ah (tan ayaan ku arki karaa xitaa tarjumaadda) waxaana jira sawirro lagu faafiyey qaar badan oo ka mid ah farriimaha - taasoo bixineysa muuqaal aad u weyn oo ku saabsan waxa ku jira.
Astaanta RSS waa mid caalami ah oo gujinaya oo iska qorta quudinta. Boggaaga guriga, astaanta ayaa leh xiriir maqaal ku saabsan "Waa maxay RSS?" laakiin iskuxirka si loogu daro quudinta runtii ma shaqeynayo (ugu yaraan kuma jiro Firefox -ka Mac). Waxaan rumeysanahay inaad wax ka beddeli karto faallooyinka si aad labadaba u oggolaato… haddii qof gujiyo astaanta RSS, waxaa loo keeni doonaa cinwaankaaga quudinta. Haddii ay gujiyaan iskuxirka maqaalka, weli way akhrin karaan maqaalka:
Waxaad ku ridi kartaa "calaamadda: tilmaame" faylkaaga CSS halkii aad ka dhigi lahayd bayaanka div.
Waxaan wax ka badali lahaa sharaxaadaada div (
) qaabka cinwaanka h2. Taasi waxay saameyn badan ku yeelan doontaa helitaanka ereyadaas oo lagu muujiyo makiinadaha wax raadinta marka loo eego div fudud.
Waxa ugu horreeya ee aan ogaaday markii aan imid goobta waxay ahayd in aysan jirin wax ku qumman 'korka laab'. Taasi waa, waxaan ku qasbanaaday inaan rogrogo si aan u helo wax kasta oo aan raadinayey. Dhaqan ahaan, ma hubo in tani ay tahay mid la aqbali karo dhagaystayaashaada laakiin runtii waa dhibaayo dadka aniga oo kale ah. Waxaa laga yaabaa inaad isku daydo inaad isku darto cinwaankaaga balooggaaga, sharraxaaddiisa, iyo boggag kasta mid ka mid ah hal jiif oo toosan kaasoo ka qaadaya dherer badan oo bogga ah oo hadda lumay walxahaas. Taasi waxay garaaci doontaa xoogaa dherer ah oo hadda loo adeegsado qaybaha yar ee jira.
Waan jeclahay qaabka leh qaybta macluumaadka qaybta hoose ee bogga, laakiin runtii waan la yaabay inay halkaas joogto! Haddii ay jirto waddo aad adigu u qaabeyso madaxa balooggaaga oo la mid ah cagaha bogga, taasi waxay u muuqan doontaa wax ka sii fiican. Xitaa waxaad xitaa ubaahan kartaa inaad wacdo cagaha bogga adoo dhigaya calaamado Dheeraad ah (mais?) Oo ay weheliyaan badhamadaada kale ee bogga u boodaya akhristaha qeybtaas.
Qoraalku waa mid shaqsi ahaan iyo shaqsiyad ahaanba leh, laakiin ma hubo in qaab -dhismeedku u habboon yahay. Xitaa tarjumaadda, waan garan karaa xiisaha aad u qabto Akhriska. Sawirka (adiga?) Akhrisku waa cajiib. Waxaan jeclaan lahaa inaan arko nooc ka mid ah sawir korka bogga sidoo kale. Waxaa laga yaabaa sawir kale oo adiga ah ama sawir buug ah oo si farshaxannimo leh ugu dhex jira sawir hore.
Bogga ku saabsan (sobre?) Bogga ayaa faa'iido yeelan lahaa. Kumaad tahay Maxaad aad ugu jeceshahay akhriska? Maxaa kugu kalifay inaad bilowdo balooggan?
Xitaa haddii aan ku jiro Tarjumaadda Google, waxaan awooday inaan arko in awoodaha qoraalka André ay ka badan yihiin kayga. Waxaan ku dhacay qoraal weyn oo ku saabsan kala duwanaanshaha wax ku qoraya kombuyuutar ama daabacan.
Shaqo wacan, André! Aad baad ugu mahadsantahay codsashada talobixintan!
Tags: descriptionQAYlaabgoogle translatemacluumaadlendoastaanta rsssumadda rssurchintracker
Waa maxay Wiki? Muuqaal
Jul 8, 2007 markay ahayd 11:49 AM
Tilmaamo yaab leh Douglas!
Waxaan si joogto ah uga shaqeynayay si aan u hagaajiyo baloogga aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ogaado inaad jeceshahay waxa ku jira, xitaa tarjumaadda.
Aad baad ugu mahadsantahay talooyinka iyo amaanta!
Waxaan sameyn doonaa isbadaladaan dhawaan waana ku soo laaban doonaa halkaan si aan ugu sheego natiijooyinka.
Jul 8, 2007 markay tahay 12:44 PM
Fadlan samee, André! Waxaan jeclaan lahaa inaan dib u maqlo.
Jul 8, 2007 markay tahay 12:08 PM
Mahad sanid saaxiib! Anigu waxaan ahay Andre saaxiibkiis aadna u qoraa!
Jul 10, 2007 markay ahayd 11:49 AM
Mar labaad waad salaaman tihiin Douglas!
Waa la qabtay 🙂
- Xiriiriyaha RSS
- Tilmaanta sharaxaadda (hadda waxaan haystaa h2 :)
- Isbedelada xagga kore, si loo dumiyo dhererka weyn oo aad loo “qurxiyo” oo loola xiriiro cagaha
- Qortay bog "ku saabsan" 😉
- Dheji xiriiriye "ka sii badan" sidii barroosinka si aad u dhigto
- Kordhi wadarta ilaa xalka 1024 × 768
- Kordhi safka-dhererka, si aad si fiican uga jeediso muxaadaro
Aad ayaan u jeclahay natiijada! Weli waxaan hayaa faahfaahin qaar si aan u saxo, laakiin waxaan u maleynayaa in balooggeygu aad uga fiican yahay hadda!
Jul 10, 2007 markay tahay 2:11 PM
Cajiib! Goobta André waxay umuuqataa mid aad ufiican! Dhowr toddobaad ka dib, fadlan ii oggolow saameynta isbeddeladan. Waa inaad bilawdaa inaad aragto wiish tartiib tartiib ah waqtiga.
Jul 17, 2007 markay tahay 1:15 PM
Nacalaa! Waxaan dhibaato weyn ku qabaa google iyo URL-ka isbedelkiisa = (
Bogag badan ayaa laga qariyey natiijooyinka, taraafigayguna aad ayuu u xun yahay = (
Natiijooyinka ka soo baxa isbeddelada qaabka waxay qaadan doonaan bilo dheeri ah. Waa ceeb ..
Jul 17, 2007 markay tahay 2:40 PM
Maxaa ku beddelay URls-ka, André? Waxaa laga yaabaa inaad qori karto dib u habeyn haddii URIs-ka boostada ay isbadaleen. La socodsii haddii aan noqon karo mid caawimaad ah si uun.
Jul 17, 2007 markay tahay 2:48 PM
Thanks by caawiye Doug! Laakiin waxaan ka beddelay qaab-dhismeedkii laga soo bilaabo% taariikhda% /% postname% illaa kaliya% postname% oo isticmaal Dean's permalink socdaalka plugin si loo sameeyo wareejinta 301. Si kastaba ha noqotee, darajooyinkayga mashiinnada raadinta ayaa la kala diray.
Waxaan u maleynayaa inaysan jirin wado lagu saxo tan. Kaliya sug darajo cusub = (
Aug 24, 2007 at 9: 09 AM
Waqti badan ka dib, bogaggaygii mar labaad ayaa la muujiyey oo, layaabteyda, booqashooyinku waxay kordhiyeen qiyaastii 400%! Cajiib!
Natiijada dadaalkaygii SEO iyo dalabkii talooyinkaagu waxay ahaayeen cajiib!